Mayelana NATHI - Hangzhou Better Daily Products Co., Ltd.
Imikhiqizo Engcono Yansuku zonke Co., Ltd.
Yasungulwa ngo-2015 Singabantu inkampani wahlanganyela OEM kanye ODM ukukhiqizwa imikhiqizo ukusetshenziswa nsuku zonke.
Umkhiqizi onguchwepheshe wokusula okumanzi.
Sigxila ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwama-wipe amanzi ezigaba ezahlukahlukene. Izigaba zethu zokusula ezimanzi zifaka ama-alcohol wipes, ama-wipe disinfection, ama-wipe wipes, ama-wipper wiper, ama-baby wipe, ama-wipe wemoto, ama-pet wipe, ama-wipe asekhishini, ama-wipe owomile, ama-wipe wobuso, njll. Ngesikhathi esifanayo, futhi sinochungechunge lwemikhiqizo efana i-sanitizer yezandla namaski. Sinikeza izinsizakalo ezenziwe ngezifiso kumakhasimende ethu. Sigxila emigqeni emithathu ehlukene yebhizinisi eletha amazinga aphezulu wenani kumakhasimende ethu ngokungafani nenye inkampani yamakhemikhali. Isiqubulo sethu sebhizinisi sithi "Ukuphepha, i-R & D kanye Nensizakalo".
Sinamalayisense wokungenisa nokuthekelisa. Ilungelo lokuthekelisa imikhiqizo yethu liqinisekisiwe. Imikhiqizo yethu ibhaliswe ne-EPA, FDA, MSDS, EN, CE nezinye izitifiketi. Uma unezinye izidingo zesitifiketi, sizimisele kakhulu ukuxoxisana nawe ukuze usigcwalise;
Imikhiqizo yethu ithunyelwa emhlabeni wonke. Sizibophezele ekuhlinzekeni imikhiqizo nezinsizakalo ezisezingeni lomkhiqizo ngamunye.
I-Better Daily Products Co, Ltd ineqembu elifudumele futhi elinobungcweti lochwepheshe abanolwazi ekukhiqizeni, ekuthengiseni, ezokuthutha zomhlaba jikelele kanye nokuphathwa okujwayelekile, ezimbili zazo ezineminyaka engaphezu kwengu-10 yolwazi lomsebenzi. Sithole ukunconywa okuningi kumakhasimende ngensizakalo yethu esheshayo futhi ecabangayo ngenxa yemikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme nethimba lokumaketha elisebenzayo.
INGCONO inikela ngamazinga amahle kakhulu ezinsizakalo futhi ixhaswa ngamanani ethu okwethenjwa, ubuqotho nentshisekelo yekhwalithi. Kungakho amakhasimende ethu amaningi ethembekile iminyaka eminingi. Sihlale senza umsebenzi omkhulu.